Mercedes CLS: izimoto ezintsha ngoba imigwaqo Russian
Uke wezwa izindaba? It kuvela ukuthi inkampani owaziwa German ngcono Mercedes CLS: manje umi injini 585 amahhashi. Abakhiqizi eJalimane asiyeki mangaza emhlabeni: muva banquma declassify ukuguqulwa entsha - S-Model. Izazi zikholelwa ukuthi le moto nakanjani uthole hhayi kuphela wonke-wheel drive Series AMG 4MATIC, kodwa torque engu is closer kuze uphawu 800 H / m. Kungenzeka ukuthi lapho idatha efana engamakhulu amakhilomitha ezizophasiswa ngokushelela ngoba 3.6 imizuzwana, futhi ukusetshenziswa isilinganiso izinga uphethiloli kumele singeqi 10.4 amalitha.
Ukuguqulwa entsha Mercedes CLS kudinga khona iminyango emine, kodwa kungenzeka ukuthi umklamo ngeke abavuthiwe ekupheleni konyaka ongakwenza. Okwamanje, kuba Sedan omuhle kunayo yonke, ukuthi amaJalimane bakwazi ukwakha. Palm babo namanje uye azisuswanga, nokunakekela ehloniphekile kusukela Chrysler kwaholela kuvulwa isigaba esisha.
Manje e-Russia ungathola kule moto zikanokusho. wabenza Domestic ukuyengela ukukhangisa oda zokufuna izinto ezintsha samukelwa ubusuku nemini. Ngokusho lokuthandwa intengo, intengo imoto iqala ngo 2 ezingu-850 eziyinkulungwane ruble Russian. Abashayeli ngothando elika Mercedes entsha CLS "esibayeni", futhi ngesizathu esihle - imoto has ngempela egunjini elivulekile. New nje happy ezinezici lobuchwepheshe: ngezindumiso basuke ezihlatshelelwa futhi bakhulise-wheel drive kanye motor trehsotshestisilnomu ivolumu ngamalitha emithathu nengxenye.
Ngaphezu nokulungiswa ngenhla, Russia ngeke give up le nqola udizili esiteshini. Inamandla Brake Shooting luzothekeliswa, ngisho nasezindaweni ezikude kakhulu zaleli ruble ayizigidi ezingu 2,95. Kusolwa ukuthi kuyoba abathengi kanye German version chetyrestavosmisilnym iyunithi. intengo yayo yaqala kwaqala nge abayizigidi ezine. Phela, kuyafaneleka ukusho ukuthi izimoto ezimbili kakade ifakwe uchungechunge ephelele drive 4MATIC.
Kungenzeka ukuthi umnyango AMG ngeke senqabe bathengisa izimoto ukuze osomabhizinisi Russian futhi izigidi ezingu-5. Ruble nge isiqalo 63 AMG Shooting Brake. Abalandeli imikhiqizo German Affalterbach ungakwazi ukujabulela ngisho Suv Mercedes GLS kuwufanele-6 million. 800 ayizinkulungwane. Ruble.
studios ezimbili American ukunikela Mercedes CLS Tuning: Ingaphandle kungenziwa yayala kusuka inkampani «Misha Designs», futhi le nkampani «Couture Customs» ukusungula ikhithi umzimba omusha futhi enze lo mdwebo.
sokunciphisa umoya lapho zindiza umzimba ikhithi It siguqule hhayi boring gumbi jikelele phambi bumper ihamba singatsheki in amaphiko enwetshiwe, ngokufanele ngaphambili futhi ifakwe namantombazane ngokuqinile mpo. Ahloselwe emoyeni.
Lezimanga aziphelelanga lapho: yesikhulumi auto show e-Los Angeles wafakwa Mersedes Bents CLS 63 AMG, eyatholakala kusukela umakhi ngcono phambi ukumiswa. Imodeli emisha eyethulwa i phambi ithrekhi enwetshiwe futhi Rack kuhambisana shock absorbers, rigidity zazo umnikazi we umshini kungase kushintshwe ngokuzimela. Umshayeli inikezwa ilungelo lokukhetha omunye ezintathu ongakhetha ekulinganiseni uhlelo. Ijubane kokushintsha ukudluliswa kuyafana.
US Ukulungele ukuhlangabeza iKosi izimoto ehlobo lika-2014, I-Europe uzobona kubo kancane ekuqaleni. Ukulinda yinde. Nakuba emakhasini omagazini ogcwele izithombe izimoto ezintsha scan ezinkulungwane zabalandeli we Mercedes iqembu. abezindaba isiRashiya ukunikeza abafundi emakhulwini izihloko, lapho ungathola ulwazi mayelana Upholstery yangaphakathi, indlela bevula iminyango, gearbox nezinye izici lobuchwepheshe wemoto.
Dweba izilwane step by step ngepeniseli. Kanjani ukufunda ukudweba izilwane step by step?
Okokuqala State Duma of the Empire, Russian
Konke mayelana nemishini yokukhiqiza izikrini zokuzibamba
Umculi imodeli Lou Rafferty: Biography, umsebenzi kanye nokuphila siqu